Weerarka Muqdisho oo la cambaareeyay - BBC News Somali
Weerarka Muqdisho oo la cambaareeyay
20 Febraayo 2015
Image caption Ciidan gaaray huteelka kadib qaraxa
Dawladda Maraykanka ayaa cambaaraysay weerarkii lagu qaaday huteel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 20 qof. Tiro kale oo ay ku jiraan ugu yaraan laba wasiir ayaa ku dhaawacmay. Waxa uu weerarkan ka dhacay huteelka Central ee bartamaha Muqdisho.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Waxaa la sheegay in bartilmaameedku ahaa saraakiil ka tirsan dawladda, oo salaada jimacaha ku tukanayay masaajid ku yaalo huteelka.
Afhayeenka Waaxada Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in weerarkan uu astaan u yahay sida kooxda Al-shabaab ay uga horimaadsantahay dadaalada ay Soomaalida ku doonayaan in ay ku dhistaan 'mustaqbal barwaaqo leh'.
''Waan sii wadi doonaa taageerada dadka Soomaalida iyo dawladooda ee ay ku doonayaan in ay dib ugu dhisaan dalkooda. Kuwa doonaya in ay isku gudbaan hormarka Soomaaliya ma guuleysan doonaan,'' ayeey tiri Psaki oo shir jaraa'id ku qabatay Washington.
Waxaa lagu sheegay in uu yahay weerarkii ugu xumaa ee caasimada ka dhaca mudda sanado ah.
Qof ayaa isku qarxiyay gudaha qolka lagu tukanayay, waxaa xigay qarax kale oo ka dhashay gaari la dhigay dibedda hore ee qolkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkani aanu dib u dhac ku keeni karin hawlaha dawladda iyo dadaalka nabada lagu sugayo.
"Waan sii wadeynaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Waxaana hubaa in weerarkan uu mar kale u caddeynayo shacabka Soomaaliyeed in kooxaha magaca diinta ku gabanaya aysan wax xushmad ah u ahayn diinteena saliimka ee Islaamka ee nabadda ina fareysa, iyagoo dilaya dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan,'' ayuu ku yiri madaxweynaha hadal qoraal ah oo uu soo saaray kadib weerarka.